पक्राउ परेका सुवेदी दम्पती छुटे
नेपालदृष्टि । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र पत्नी माधवी सुवेदी छुटेपछि ठूलै सेटिङ भएको खुलेको छ । यो प्रकरणमा भूमाफिया सुवेदीले अदालतमा मुद्दा नपुग्नेसम्मको सेटिङ गरेको बुझिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । तर, अनुसन्धान पर्याप्त नपुगेको भन्दै फर्काइएपछि हदम्याद गुजार्न खोजिएको आशंका भइसकेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआइबीले रामकुमार र माधवीलाई मात्र समात्यो । जबकि २ सयभन्दा बढीमाथि अनुसन्धान गर्ने गरी पूर्जी समेत काटिएको थियो । तर, सुवेदी दम्पत्तिमात्र पक्राउ परे ।
माधवी सुवेदी मुटुको समस्या भएको भन्दै ग्रान्डीमा भनाई भइन् । रामकुमार सुवेदी मात्र सीआइबीको हिरासतमा रहे । ललितानिवासका अर्का मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल भने डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोप लागेका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी यही पुस ७ गते पक्राउ परेका थिए । मालपोत कार्यालयमा लेखन्दासको काम गर्ने सुवेदीले शोभाकान्त ढकालसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र पत्नी माधवी सुवेदी
सीआइबीले निकै चर्चामा ल्याएर गरेको अनुसन्धान नै शंकाको घेरामा परेको छ । जबकि २०७६ मै निरज शाही सीआइबीको निर्देशक हुँदा ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धान भएको थियो । तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई जाहेरीसम्बन्धी पत्र नै बुझाएका थिए । जसमा ३ सयभन्दा बढी जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको उल्लेख थियो ।
यसपटक सीआइबीलाई पुनः सक्रिय गराउनुलाई ठूलै बार्गेनिङका रुपमा हेरिएको छ । त्यसमाथि संलग्न भनिएकाहरु कोही पनि पक्राउ नपर्नु र परेका मुख्य योजनाकार सुवेदी दम्पत्ति पनि छुट्नुले नयाँ रहस्य जन्माएको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार रामकुमार सुवेदीले निकट व्यक्तिहरु परिचालन गरी ठूलै सेटिङ गरेका छन् । यही सेटिङका कारण उनीमाथि मुद्दा दायर नगरी रोकिएको छ । उनी पनि हिरासतबाट छुटेका छन् । छुटेलगत्तै रामकुमार सुवेदी ललिता निवास प्रकरणलाई मिलाउन सक्रिय भइसकेका छन् ।
सीआइबीलाई लगाएर राजनीतिक तहबाटै ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नहरुलाई चोख्याउने खेल भएको खुल्दै गएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार यो प्रकरणलाई सामसुम पार्न खोजिएको छ । यो प्रकरणका योजनाकार देखि घूसवापत् जग्गा हात पार्नेहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था बनेको छ । - रिपोर्टर्स नेपाल
संसद विघटन बारे के भन्छन् वामदेव गौतम ?
राष्ट्रपतिको लागि प्रचण्डविरुद्ध रेखा थापा
माछा ब्यवसायमा आर्कषित युवा उद्यमी के भन्छन ?
लगातार परेको पानीले देशभरको जनजीवन प्रभावित